Milanja kokoa amin'ny fitsipika ve ianao? Misy fiantraikany amin'ny lanjan'ny vatana ny tsingerim-bolana | Nutri Diet
Milanja kokoa amin'ny fitsipika ve ianao?
Aron | | fahasalamana
¿Miaraka amin'ny fitsipika dia mavesatra kokoa ny lanjanao? Ny tsingerim-bolana amin'ny vehivavy dia mifamatotra akaiky amin'ny fitomboana na fihenan'ny lanjan'ny vatana, tsy mandritra ny fadimbolana ihany koa, fa mitranga koa izany alohan'ny sy aorian'ny fadimbolana.
Hahafantatra tsara satria amin'ny fitsipika dia milanja kokoa ianaoAndao hojerentsika izay misy fiantraikany amin'ny vatantsika amin'ny famitana io fanovana lanja io. araka ny Fikambanana Amerikanina Dietetika Misy fiovana efatra ny lanjany mifandraika amin'ny fadimbolana, izany hoe:
1 tonga fotoana
2 Ny dingana follicular
3 ny famokarana atodinaina,
4 Ny dingana luteal
Rehefa manomboka mijaly ny vatana ny tsingerina isam-bolana, mety hahatsapa ianao kiritika, fivontosana, havizanana ary toe-po tsy azo antoka, fa amin'ny lafiny tsara kosa rehefa mivaingana ny vatana dia mandeha ny saron-tranonjaza miomana amin'ny tsingerin'ny ra vaovao.
Ka rehefa mandeha ny fotoana, fahazotoan-komana, faniriana hihinana ary hanjavona ny fivontosana, raha ny marina mihena ny lanjany aorian'ny fijanonan'ny tsingerina.
Ny dingana follicular
La dingana follicular dia ny fizotry ny fahamatorana ny ovules ary amin'ity dingana ity dia hiezaka ny vatana hisafidy voajanahary ny atody tonga lafatra. Izany no mahatonga ny hormonina estrogen mitombo.
Mampalahelo fa mandrisika ny nitombo ny lanjan'ny vatana ary mihamatevina ihany koa ny saron'ny tranon-jaza mba hitsena ireo embryon izay miandry ho zezika, io dia rehefa afaka miakatra hatramin'ny 1 kg ny vatanao.
ny famokarana atodinaina,
Ao amin'ny dingana ovulation Hahatsapa ho mavitrika kokoa ianao nefa matetika mahatsapa ho mibontsina, manomboka mihisatra ny tratra ary hisy fiatraikany amin'ny fitomboan'ny lanja ihany koa. Ny vehivavy sasany amin'ity dingana ity dia miaina ny fangatahana rano be loatra ho valin'ny hormonina.
Ny dingana luteal
La dingana luteal dia antsoina hoe fotoana aorian'ny ovulation. Izany no fotoana nitrangan'ny ovazy hatramin'ny andro voalohany tonga fotoana.
Amin'ity dingana ity dia tsy mahatsapa mamontsina mandritra ny andro vitsivitsy ianao. Andro vitsy taty aoriana dia tsapanao ny mahazatra fantatra amin'ny hoe Aretim-piterahana.
Tadidio: ny vehivavy rehetra dia miaina tsingerina isan-karazany ary raha mandray ianao fanabeazana aizana hormonina ny fitomboan'ny lanja dia mety ho lehibe kokoa aza.
Araka ny hitanao dia voamarina tokoa fa satria mavesatra kokoa ny vanim-potoana, na dia miankina amin'ny vatantsika sy ny fiantraikan'ny fadim-bolana amintsika aza izany rehetra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Milanja kokoa amin'ny fitsipika ve ianao?
Analia dia hoy izy:
Te-hahazo fampahalalana bebe kokoa toy izao aho. Fanamarihana tena tsara!
Mamaly an'i Analía
Paikady telo isan'andro hanatsarana ny fahatsiarovana tsy misy ifandraisany amin'ny sakafo
Ahenao ny fahitana ireo marika mihinjitra amin'ireto fanafody voajanahary manaraka ireto